Social Media Matures | Martech Zone
Mgbasa Social Media
Satọde, Febụwarị 11, 2012 Wednesday, December 26, 2012 Bọọlụ Lorraine
Afọ iri isii gara aga ka telivishọn na-apụta n'ebe ahụ, mgbasa ozi TV yiri mgbasa ozi redio. Ihe ndị mejupụtara ha bụ isi onye na-ese ihe n'ihu igwefoto, na-akọwa ngwaahịa, dị nnọọ ka ọ ga-esi na redio. Naanị ihe dị iche bụ na ị ga - ahụ ya ka ọ na - ejide ngwaahịa a.
Dika TV toro, otu a ka mgbasa ozi si bia. Dika ndi na ere ahia muta ike nke ihe nlere anya ha meputara mgbasa ozi itinye aka na mmetụta uche, ufodu di ochi, ndi ozo di uto ma obu obi uto ma ufodu di egwu ma na eche echiche. Ọ bụ ezie na ndị na-ekiri ihe na-eme ka ọ dịkwuo njọ taa, anyị ka nwere ike ịkwaga n'ọchị, anya mmiri ma ọ bụ mee ihe na mgbasa ozi ziri ezi. (N'ọtụtụ oge, anyị ga -, na - ele ya na Youtube).
Imewe weebụ agabigala otu usoro ahụ, site na oge broshuọ saịtị, anyị kwagara iji gbaa ma na-emegharị eserese iji kpalie onye ọbịa ahụ, n'ikpeazụ, saịtị enyi na enyi na-agagharị agagharị, nke na-aga ebe ndị ahịa anyị nọ, yana atụmatụ mmekọrịta iji mepụta ahịa mkparịta ụka na ndị ọbịa.
Ma ugbu a, anyị na-ahụ ntanetị mgbasa ozi na-agabiga otu ụzọ. Site na mkparịta ụka na-akpata nkesa na mgbasa ozi nke ozi ahịa, ndị ahịa maara ihe na-amụta ịchọta ntụzi n'etiti mkparịta ụka, itinye aka na ntakịrị azụmaahịa atụbara. Ka ndị na-ajụ ase na-eto, ọtụtụ ndị nwere obere azụmaahịa na-ewere ya nke ọma dịka akụkụ nke ahịa ha. agwakọta.
Echiche a bụ nrọ ma ọ bụ na enwere mgbanwe dị iche? Anyị chọrọ ịma, yabụ anyị na-eduzi obere azụmaahịa nnyocha mgbasa ozi mmekọrịta ma na-atụle nsonaazụ ya na afọ ndị gara aga. Anyị na-atụ anya ị nweta ọtụtụ nsonaazụ ndị ọzọ, mana ọtụtụ okwu anyị ahụgoro ugbu a gosipụtara mmụọ ntozu oke a.
Site na nyocha:
Anọ m na-ekwusi ike banyere ịde blọgụ na oge ma na-echegbu onwe m na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ adịchaghị elu. Enweela m obi iru ala na blog mgbe m nwere isiokwu nke mmasị ma tinye akwụkwọ m na ndụ na nzuko na ọzụzụ nke mmadụ. Ndị ahịa na-enwe njikọ njikọta na isiokwu ndị nwere mmasị ma enwere m ike ịhụ na ha gara - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha ahapụghị okwu.
Na-etinyekwu oge na obere ndị na-ajụ ase. Althought M na-achọkarị ikpo okwu ọhụụ, mgbe ọ bịara, anyị ga-ahapụ otu nke ochie.
Anọ m na-arụ ọrụ iji mepụta atụmatụ dị mfe ma lekwasị anya nke na-emekọrịta mmekọrịta na ndị ahịa.
Kedu maka gị? You gbanwela ụzọ gị na nke a maturing ajụ? You na-ahụ nsonaazụ? Anyị ga-achọ itinye ahụmahụ gị na nke anyị nnyocha mgbasa ozi mmekọrịta. ọ ga-ewe naanị nkeji ole na ole (Ọ bụ naanị ajụjụ 20). Mgbe ahụ chọọ ihe nsonaazụ ndị a ebe emechara n'oge opupu ihe ubi a.
Mepụta Ule ngwa ngwa na Nyochaa
Ndụ Social Media Lifecycle